Heimir Hallgrimsson oo lagu daray diiwaanka halyeeyada baalka dahabka ka galay taariikhda kubadda cagta Adduunka
Thursday, January 24th, 2019 - 10:07:51
Tuesday October 10, 2017 - 10:37:58 in Wararka by Kubad Bile
Heimir Hallgrimsson ayaa ka saaciday xulka qaranka Iceland in ay usoo gudbaan koobka aduunka markoodii ugu horeesay ee taariikhda.
Balse arinta layaabka leh ayaa waxaa ay tahay in xidiga dalkaasi kabtanka u ah oo lameel dhigay halyeeyadii kubada cagta Pele iyo Diego Maradina.
Hor-boodaha xulka Iceland Heimir Hallgrimsson ayaa hadalkaan ku adkeesanaaya kadib markii xulkiisa ay awoodi u yeesheen inay iska xaadariyaan dhacdada afartii sanaba mar laqabto xili bartama 2018-ka lagu balansanyahay dalka qaboobaha badan ee Russia.
Labo gool oo ay kala yimaadeeyn Gylfi Sigurdsson iyo ninka lala meel dhigay Pele iyo Maradona ee Johann Gudmundsson ayaa xulkaan aadka u dhulka yar waxaa ay ka saaciday kaalinta koowaad inay kaga soo baxaan Group I iyagoo Luka Modric iyo xulkii u direen inay ciyaaraan Play-off.
Iyadoo shacabka Iceland kunool tiradooda lagu sheegay 330,000.kun Ayaa waxaa xulkaani lagu xasuustaa Euro 2016 in ay gaareen quarter-final. In ay iska xaadariyaan koobka aduunka ee soo aadan ayaa sidoo kale waxay u noqon doonntaa rikoor meel qaas ah ay kuqon doonaan. Xili ay noqdeen dalkii ugu yaraa ebad ee koob aduun isa keena.
Hallgrimsson awoodi waayay in uu qariyo farxadiisa amaba ladhihi karay farxada ayaa ka tanbadisay. Ayaa Waxa uu isbar-bardhig uu ku sameeyay wiilka khadka dhaxe xulkaasi uga ciyaari ee Aron Einar Gunnarsson iyo labadii xidig ee waqtiga fiican kusoo qaateen kubada cagta Pele iyo Maradona.
"Tani waa arun aan caadi aheyn. Magaranaayo runtii waxaan dhaho.maskaxdu wey ka baxaysaa halkeyda"ayuu macllinkaan u sheegay via RUV.
Waxaan uu hadalkiisa uu kusoo af meeray. "Waxaan kala jeedaa. Pele. Maradona iyo Aron Einar Gunnarsson"